KYAW CHAN NYEIN: မိမိဘဝတိုးတက်မြင်.မားလာအောင်လုပ်ဖို.အဓိကအချက်
" ဤလောက၌ အဓမ္မ မထွန်းကားအောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ လူတိုင်း၌ တာဝန်ရှိသည် " " မေတ္တာတရားရဲ့ရနံ့သည်သာ လူသားအားလုံးကိုကြည်လင်လန်းဆန်းစေပါသည် " " မြန်မာပြည်သူ့ ပြည်သားများ အားလုံး၊ ကျန်မာရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ "
မိမိဘဝတိုးတက်မြင်.မားလိုလျှင်မိမိ၏အားနဲချက်များ (weakness) ကိုအားသာချက်များ(Strength) အဖြစ်နေ.စဉ်ပြောင်းပါ။မိမိဘ၀ကို အောင်မြင်အောင် စတင်တည်ဆောက်တော့မယ်ဆိုရင် ပထမဆုံးပြုလုပ်ရမယ့်အချက်ကတော့ “ပြုပြင်ခြင်း” ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကို စတင်ပြုပြင်ရမယ်။ ပြုပြင်တယ်ဆိုတာ ဘာလုပ်တာလဲ မေးရင်တော့ “ကောင်းအောင်လုပ်တာ” ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိမှာရှိတဲ့ မကောင်း တဲ့ အရာတွေကို ကောင်းလာအောင် ပြုပြင်တာဟာ ဘ၀ရဲ့ အောင်မြင်မှု အခြေခံ ဖောင်ဒေးရှင်းကို စတင်ချတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ကိုယ့်မှာ ပြုပြင်စရာ ဘာတွေရှိသလဲဆိုတာ ကိုယ်တိုင် သိမြင်အောင် ဆန်းစစ်လေ့လာဖို့ လိုပါတယ်။ အားနည်းချက်တွေလား၊ လိုအပ်ချက်တွေလား၊ ချို့ယွင်းချက်တွေလား စတဲ့ ပြုပြင်စရာတွေ ဘာရှိမလဲ သိအောင်လုပ်ပါ။ ကိုယ်ပြုပြင်ရမယ့်အချက်တွေကို စဉ်းစားပြီး စာရွက်ပေါ်မှာချရေးလိုက်ပါ။ ဘာတွေပြုပြင်ရမလဲဆိုတာ အတိအကျ သိရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
အစစ်အမှန် တိုးတက်အောင်မြင်စေမယ့် အတွင်းစိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ အတွေးအခေါ် တွေ၊အပြုအမူတွေ၊ အကျင့်စာရိတ်္တတွေကိုလည်းအထူးပြုပြင်သင့်ပါတယ်။
Posted by KYAW CHAN NYEIN at 11:02 AM
ကိုးကွယ် ရမှာက ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ။
မိတ်ဆွေ စစ်က ကံ၊ ဉဏ်၊ ၀ီရိယii
ပြီးတော့ နေ့စဉ် အလုပ်က ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ။
အမြဲ နှလုံးသွင်း ရမှာက အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တii
“သာမည ဆရာတော် ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တ၀ိနယ"
မကောင်းမှုရှောင် ကောင်းမှုဆောင်၊ ဖြူအောင်စိတ်ကိုထား။ ပြောပြုတွေးလျှင် သတိယှဉ်၊ ဆင်ခြင်ဉာဏ်ရှေ့သွား။
စိတ်ထားဖြောင့်မှန် ခွင့်လွှတ်ရန်၊ သည်းခံမေတ္တာထား။ လုံ့လနှင့်ဇွဲ မလျှော့ဘဲ၊ အမြဲတင်းတင်းထား။ အရာရာတွင်အသုံးဝင် အောင်မြင်ကြောင်း တရား"
တစ်အချက်က ကိုယ့်ခံစားချက်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်.
ငါးအချက်က ကောင်းမွန်တဲ့ လူလူချင်းဆက်ဆံပြောဆိုရေးတွေဖြစ်တယ်.
(၁) အရဟံ-ကိလေသာကင်း၍ ပူဇော်အထူးကို ခံထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား။
(၂) သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ-သစ္စာလေးပါးတရားကို ဆရာမရှိ ကိုယ်တော်တိုင် သိတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။
(၃) ၀ိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော-အသိနှင့်အကျင့် ပြည့်စုံတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။
(၄) သုဂတော-ကောင်းသောစကားကိုသာ ပြောဆိုတော်မူတတ်သော မြတ်စွာဘုရား။
(၅) လောက၀ိဒူ-လောကသုံးပါးကို အကုန်အစင် သိမြင်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။
(၆) အနုတ္တရောပုရိသဒမ္မသာရထိ-ဆုံးမထိုက်သူတို့ကို ယဉ်ကျေးအောင် ဆုံးမတော်မူတတ်သော မြတ်စွာဘုရား။
(၇) သတ္ထာဒေ၀မနုဿာနံ-လူ နတ် ဗြဟ္မာ သတ္တ၀ါတို့၏ ဆရာတဆူ ဖြစ်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။
(၈) ဗုဒ္ဓေါ-သစ္စာလေးပါးကို မိမိကိုယ်တော်တိုင်လည်းသိ၊ သူတပါးတို့ကိုလည်း သိအောင် ဟောပြတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။
(၉) ဘဂ၀ါ-ဘုန်းတော်ခြောက်ပါး ဂုဏ်တော်တွေအနန္တနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား-ဟူ၍ ဘုရားရှင်၏ ဂုဏ်တော်တို့ကို ချီးမွမ်းပူဇော်ကြရမည် ဖြစ်သည်။
၁။ ငါသည် အိုခြင်းသဘော ရှိသည်ဖြစ်၏။ အိုခြင်း သဘောတရားကို မလွန်ဆန်နိုင်။
၂။ ငါသည် နာခြင်းသဘော ရှိသည်ဖြစ်၏။ နာခြင်း သဘောတရားကို မလွန်ဆန်နိုင်။
၃။ ငါသည် သေခြင်းသဘော ရှိသည်ဖြစ်၏။ သေခြင်း သဘောတရားကို မလွန်ဆန်နိုင်။
၄။ ငါ့အား ခပ်သိမ်းသော နှလုံးကို ပွားစေတတ်သော အဆွေအမျိုး၊ အဆွေခင်ပွန်း၊ ချစ်ကျွမ်းဝင်သူတို့ နှင့် အရပ်တစ်ပါးသို့ ပြောင်းသွားသဖြင့် ရှင်ကွဲ ကွဲရခြင်းသည် လည်းကောင်း၊ ဘ၀တစ်ပါးသို့ပြောင်းသွားသဖြင့် သေကွဲ ကွဲရခြင်းသည် လည်းကောင်း ဖြစ်တတ်ချေ၏။
၅။ ငါသည် ကံသာလျှင် မိမိဥစ္စာရှိသည်၊ ကံသာလျှင် အကြောင်းရင်းရှိသည်၊ ကံသာလျှင် အမွေခံရှိသည်၊ ကံသာလျှင် အဆွေအမျိုးရှိသည်၊ ကံသာလျှင် ကိုးကွယ်လဲလျောင်းရာ ရှိသည် ဖြစ်၏။ ကောင်းသည်လည်း ဖြစ်သော၊ မကောင်းသည်လည်း ဖြစ်သော အကြင်ကံကို ပြုအံ့။ ထိုပြုသော ကောင်းမှု မကောင်းမှုကံ၏ ကောင်းမွေ ဆိုးမွေခံသည် ဖြစ်ရအံ့။
အေး, ချို,ဆိမ့်, ချွဲ၊ ကြေကျက်ခဲကို၊ အမြဲစားလျက်၊ နေ့အိပ်စက်၍၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား၊ လွန်နည်းပါးမူ၊ လူကား ဝ,၏၊ အားမရှိဘဲ၊ ဗျဝိထူပြော၊ ရောဂါပေါသည်၊ ဝသော သူ၏ အပြစ်တည်း။
သြော် ... လူ့ပြည်လောက၊ လူ့ဘ၀ကား
သင်၏ မျိုးသား၊ စာစကားလည်း
ပြောင်လျက်ဝင်းလျက် ကျန်စေသတည်း။ ။
လမ်းမထက်တွင် ရှု မြင်မလှ
ဘယ်မှာလည်း မင်း . . .
သူငယ်ချင်း . . . . . ။
( ရွှေညာခိုင်စိုး )
သင့်မေတ္တာဖြင့် သင့်ရွာ အကျိုးကို သယ်ပိုးပါ။
သင့်အကြင်နာဖြင့် သင့်ရွာ သာယာအောင် ပြုပါ။
သင့်ပညာဖြင့် သင့်ရွာ အမြင်ကျယ်အောင် လုပ်ပါ။
သင့်စေတနာ သင့်ထံ ပြန်လာမည်။
သင့်ကြိုးစားမှုဖြင့် သင့်ရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို ကူညီပါ။
သင့်သည်းခံမှုဖြင့် သင့်ရွာ ညီညွတ်မှုကို အားပြုပါ။
သင့်သီလဖြင့် သင့်ရွာ လုံခြုံမှုကို စောင့်ရှောက်ပါ။
သင့်ကို သတ်ရင် သင် ကျေနပ်နိုင်မလား။
သင့်ဥစ္စာကို ခိုးရင် သင် ကြိုက်နိုင်မလား။
သင့်သမီးနဲ့ ဇနီးကို ဖျက်ဆီးရင် သင် သဘောတူနိုင်မလား။
သင့်ကို လိမ်ညာရင် သင် လက်ခံနိုင်မလား။
သေရည်အရက်ကို သောက်ပြီး သင့်ကို ရမ်းကားရင် သင် နှစ်ခြိုက်နိုင်မလား။
ဒါတွေကို စဉ်းစားကာ ကိုယ်ချင်းစာ၍ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
ချက် အောက် စကားတွေ တပြောပြောနဲ့
ရွာလယ်မှာ စွာကျယ် စွာကျယ်နဲ့
ငြင်းမယ် လို့ မကြံနဲ့
ငါသာလျှင် အမှန် လို့၊ ငါ မာန်တွေ တက်
ငါ အရိုးမျက်နေတဲ့၊ လက်တို အခက်ပို အမျက်သို နေတဲ့ အဖိုးကြီး။
ဒီလို အဖိုးကြီးမျိုးတော့ ဆောရီး..ဆောရီး
အသက်ကြီးတော့လဲ အဖိုးကြီး ဖြစ်မှာပေါ့လေ..
ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်ဆင်း၊ ကိုယ့်ယာခင်း ကိုယ်စိုက်
လျှာအလိုမလိုက်၊ ဘာကိုမှ မကြိုက်
စာပေလဲ မပြတ်၊ ကဗျာတွေလဲ ဖတ်
ဇရပ်ငုံးတို တာတမံ ခရိုး အနီးက
မပြတ်ပြုံးချိုနေတဲ့ သာမန် အဖိုးကြီးပဲ ဖြစ်ချင်တယ်။
( ဇော်နောင် )
သမိုင်းလှဖို့ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားကြ စို့ ။
အနဲဆုံးတော့ နင်ပြိုင်ပွဲ ဝင်ခဲ့သေးတာပဲ။
မိုးဒဏ် လေဒဏ် နေဒဏ်တွေရဲ့အောက်
ရုံးကန်နေရလို့နင်ပင်ပန်းနေတယ် ဟုတ်လား။
အနဲဆုံးတော့ ကြယ်တွေစုံတဲ့ လပြည့်ညတွေကို
ခွဲခွာခဲ့ရလို့နင်မပျော်ဖြစ်နေတယ် ဟုတ်လား။
အနဲဆုံးတော့ သူတို့ တွေနဲ့ အတူ
အောင်မြင်တလှည့် ၊ ရှုံးနိမ့် တလှည့်နဲ့ 
ဒူးတွေပြဲပြီး တံတောင်တွေလဲပွန်းခဲ့ပြီးပြီ ဟုတ်လား။
လှိုင်းကြမ်း ၊ လေကြမ်း ၊ ဘဝတွေလဲ ကြမ်းပါစေအုံး
ချစ်တက်ခဲ့လွန်းလို့လွမ်းရပါစေအုံး
အနဲဆုံးတော့ ငါတို့ တတွေ
မလျော့သောဇွဲ ၊ လုံ့ လ ၊ ဝီရိယတွေနဲ့ 
အကောင်းဆုံး ကြိုးစားဖို့ အခွင့်အရေးရှိနေသေးတယ်လေ။
ကဲ .....အားမွေးလိုက်ကြ စို့ သူငယ်ချင်းရေ ....
ငါတို့ သမိုင်းလှပဖို့ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားကြ စို့ 
dont know whose poem
ဘုရင်ဆိုတာ တိုင်းပြည်ရဲ့ service ပဲ၊ တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးအတွက် service ပေးနိုင်ဘို့ရန် သူတို့ရဲ့ investment (အရင်းအနှီးက) က ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် ပညာပ ဒီနှစ်ခုပဲ။ King တို့ Government တို့ဆိုတာ တိုင်းပြည်ရဲ့ service အလုပ်အကြွေးပဲ။ service (အလုပ်ကြွေး) ဖြစ်ဘို့ရန် character (သီလ)နှင့် wisdom (ပညာ) လိုအပ်တယ်။ wisdom ဆိုတာကို ပြန်ပြောင်းပြောရင် education ပဲ။ အဲဒီနှစ်ခုကင်းမဲ့နေရင် အဲဒီဘုရင်ဟာ တိုင်းပြည်အတွက် အသုံးမကျဘူး၊ အဲဒီအစိုးရဟာလည်း အသုံးမ၀င်ဘူး။ အဲဒီတော့ မင်းတို့တတွေ အခု ပညာသင်နေကြတယ်၊ ကျောင်းတက်နေကြတယ်၊ ဘာလုပ်ဘို့လဲ။ Ph.D ဘွဲ့တွေချိတ့်ပီး ဘာလုပ်မလဲ။
ဖိတွယ်တတ်တာ ဆိုရင် …
မကွယ်မ၀ှက် ဖွင့်ပြောတတ်တာ ဆိုရင်...
တစ်ခုတည်းအတွက် ကြံစည်တာ ဆိုရင် …
အထက်စီးက ဆက်ဆံခွင့်ရတာ ဆိုရင် …
ခင်တယ် ဆိုတာကို ပြောတာ ဆိုရင် …
`ရာသက်ပန် ဖျက်သိမ်း´ ဆိုတာလေး
*** If money is your hope for independence you'll never have it. The only real security thataman will have in this world isareserve of knowledge, experience, and ability *
လူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဟာ သူဖြတ်သန်းလာတဲ့ခေတ်ကာလရဲ့ သမိုင်းပေးတာဝန်အပေါ် သူဘယ်လောက်ထမ်းဆောင် ကျေပွန်လဲဆိုတဲ့အပေါ် မူတည်တယ်။
NATURE OF HUMAN LIFE
‎***your property will remain when you die, your friends and relatives will follow you up to your grave. but only good or bad actions you have done during your life-time follow you beyond the grave***
ကိုးကွယ် ရမှာက ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ။ မိတ်ဆွေ စစ်က ကံ၊ ဉဏ်၊ ၀ီရိယii ပြီးတော့ နေ့စဉ် အလုပ်က ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ။ အမြဲ နှလုံးသွင်း ရမှာက အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တii (သာမည ဆရာတော် ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တ၀ိနယ)
"Success seems to be connected with action. Successful people keep moving. They make mistakes, but they don't quit-"
Travel Guides - World Travel Guide
Thumingala - Deou - Biography
Theravada Dhamma MP3s, eBooks, Dhamma Songs, Videos Many More!!
Computer. Engineering, IT& Making Blogs
Mechanical and Electrical Engineering for Building Services
ကန်ထရိုက် တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာဘို့ အခြေခံ လိုအပ်ချက် များ (Elements of Contracts)
COUNTERS | Spinpalace casino | BINGO ONLINE | casino | Casinoeuropa
မသေချာ ခြင်းတွေ နဲ့ မနက်ဖြန်
THE ART of FREEDOM FILM FESTIVAL 2012 | လှတျလပျွခငျး​အနုပညာ ရုပျရှငျပှဲ​တျော၂၀၁၂
Welcome to Myitmakhamediagroup
myanmar embassy in singapore
မွေးနေ့အလှူအဖြစ် ငွေကျပ် (၁၂) သိန်း လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ စမိုင်းလ်
စာရေးသူနှင့် Report Card
ကျွန်တော် SOL @ Hein Oo
စင်္ကာပူတွင် ဆယ်စုနှစ်တစ်စု ကြာသောအခါ
Your Life $uccess
နှစ်သစ်မှာ လူသစ်ဖြစ်ဖို့ကို မေ့လိုက်ပါ
သမိုင်းဝင် တော်လှန်ရေး ကူးစက်မှုများနှင့် လူထုအောင်ပွဲ
Socialbakers ❶ Social media (Facebook, Twitter…) marketing, statistics &amp; monitoring - Socialbakers
ဧဒင်ဥယျာဉ် - The Most Popular Myanmar Social Network.
AUTOCAD DRAWING BLOGS
ကုသိုလ်ရှင် စေတန်ာရှင်များ ဆက်သွယ်ရန်
Everyone's Blog Posts - ဧဒင်ဥယျာဉ်
ကမ္ဘာသစ် - နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါသည် ... ။
LEARN APPLY ENGLISH
Latest Activity on Myanmar in Singapore
Kyaw Lwin liked Kyaw Lwin's discussion Common room near Commonwealth MRT for rent!
Pae Phu Hlwar Magazine
Latest Activity on ဧဒင်ဥယျာဉ်
Blog Archive January (1) November (3) August (6) January (7) September (1) July (5) April (23) February (19) January (5) October (3) August (7) July (7) June (2) January (2) November (1) October (15) June (3) May (3) April (3) February (6) August (4) May (2) March (26) February (6) January (1) November (19) October (5) September (3) August (36) July (3) June (1) May (3) April (1) February (6) January (3) December (2) November (4) October (9) September (7) August (4) July (9) June (2) May (11) April (15) March (13) February (3) January (4) December (3) November (13) October (12) September (13) August (23) July (44) June (4) May (32) April (16)
LIVE (DHAMMA TALK)